Xildhibaanada Galmudug oo maanta gacanta iskula tagay iyo Xildhibaan ilkaha laga Qubay (Sawiro) - Hablaha Media Network
Xildhibaanada Galmudug oo maanta gacanta iskula tagay iyo Xildhibaan ilkaha laga Qubay (Sawiro)
HMN:- Warar Goordhow naga soo gaadhaya magaaladda Cadaado ee xarunta KMG ah ee Galmudug ayaa sheegaya in kulan ay lahaayeen xildhibaanada maamulkaas gacanta la isula tagay oo lagu dagaalamay.
Kulankan ayaa waxaa looga hadlayay xiliga ay qabsomeyso doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug, iyadoo xildhibaanada ay isku qabsadeen in doorashada ay dhacdo 28-ka bisha halka kuwa kale ay dalbadeen in la aqbalo codsigii RW Xasan ee ahaa in doorashada dib loo dhigo 45 cisho.
Dooda ayaa meel xasaasi ah gaadhay taas oo keentay iney gacanta iskula tagaan Xildhibaanada, waxaana la isgaarsiiyay dhibaatooyin xoogan.
Dadka ay dhibaatada ugu badan soo gaadhay waxaa kamid ah Xildh. Maxamed Xasan Geele oo kamid ah maamulka Galmudug, xildhibaankan ayaa sida aad sawirada ka arki kartaan waxaa ka maqan qeybta sare ee ilkihiisa halka dhinaca isha uu dhaawac xoogan kaga yaal.
Waxaa jira xildhibaano kale oo ay jug culus kasoo gaadhay dagaalkan gacanta ah ee ay maanta isula tageen Xildhibaanada Maamulka Galmudug.
Sawiro ku saabsan Xildhibaanka